कृष्ण कँडेललाई ब्यापारी भनेपछि पत्रकारसँगै चर्का**चर्की ।। रुपक बाँसुरीले गरे रमेश प्रसाईँको अपमान, यस्तो मान्छे लाई तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ ? | Public 24Khabar
Home News कृष्ण कँडेललाई ब्यापारी भनेपछि पत्रकारसँगै चर्का**चर्की ।। रुपक बाँसुरीले गरे रमेश प्रसाईँको...
कृष्ण कँडेललाई ब्यापारी भनेपछि पत्रकारसँगै चर्का**चर्की ।। रुपक बाँसुरीले गरे रमेश प्रसाईँको अपमान, यस्तो मान्छे लाई तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ ?
सत्तारुढ दल नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक स्थगनको श्रृंखला सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको असन्तुष्टिकाबीच मंसिर २१ मा बसेको बैठक एक साताका लागि स्थगित भएको थियो ।
त्यसपछि आइतबार बसेको बैठक पनि शोक प्रस्ताव पारित गर्दै तीन दिनका लागि अर्थात् पुस १ सम्म स्थगित भएको छ । र, संयोग कस्तो छ भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दुवै बैठक स्थगन महासचिव विष्णु पौडेलको आग्रहअनुसार गरेका छन् ।
नेकपाको स्थायी कमिटीका एक सदस्यकाअनुसार आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले महासचिव पौडेलमार्फत आएको प्रस्तावअनुसार तीन दिनका लागि बैठक स्थगन गरिएको जानकारी दिएका थिए । दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले महासचिव पौडेलमार्फत तीन दिनका लागि बैठक स्थगनको प्रस्ताव पठाएका थिए ।
त्यसैअनुसार पुस १ सम्म बैठक स्थगित भएको दाहालले बैठकमा जानकारी गराएका थिए । यद्यपि बैठक अगाडि नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आइतबार बिहान खुमलटार पुगेर अध्यक्ष दाहालसँग भेट पनि गरेका थिए ।
आइतबारको बैठकमा दुई अध्यक्षले आफ्ना प्रस्तावमाथि व्याख्या गर्ने र त्यसपछि सचिवालयका सदस्यहरुले धारणा राख्ने कार्यसूची थियो । यसअघिकै बैठकमा दुई अध्यक्षका प्रस्ताव र पत्र अध्ययनका लागि स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठक केन्द्रीय सदस्य कमानसिंह लामाको निधनमा शोक–प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । सांसद एवं पूर्वराजदूत लामाको कोरोना संक्रमणका कारण बिहीबार निधन भएको थियो ।
यस अगाडि एक साता बैठक स्थगनमा पनि महासचिव पौडेलकै भूमिका थियो । २१ मंसिरको बैठकमा महासचिव पौडेलले केही समय बैठक रोकेर विवाद समाधानमा अनौपचारिक संवाद गर्ने प्रस्ताव गरेपछि बैठकको अध्यक्षता गरेका दाहालले एक साताका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।
त्यसदिन धुम्बाराहीमा बसेको बैठकमा अन्तिम समयमा आएर ओली सहभागी भएका थिएनन् । अर्का अध्यक्ष दाहालको प्रस्ताव छलफलका लागि योग्य नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए ।
ओली सहभागी नहुने निश्चित भएपछि त्यसदिन स्थायी कमिटी बैठक अगाडि सचिवालयको अनौपचारिक बैठक बसेको थियो । त्यहीँ बैठकमा महासचिव पौडेलले बैठक केही दिन सार्न प्रस्ताव गरेपछि अध्यक्ष दाहालले त्यसैअनुसार कदम चालेका थिए । एक साता बैठक स्थगित भएपछि ठोस सहमति नभए पनि आइतबारको बैठकमा ओली सहभागी भएका छन् । बैठकमा ओलीको सहभागितालाई अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सकरात्मक रुपमा लिएको ती निकट नेताहरुले बताएका छन् ।
२१ मंसिरको बैठक एक साता स्थगनपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘यो अवधिमा स्थायी कमिटीका नेताहरूलाई दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव र पत्र अध्ययन गर्न भनिएको छ, सहमतिका लागि अनौपचारिक रूपमा कोसिस जारी रहनेछ ।’ पार्टीमा गहिरिँदो संकट समाधानका लागि अनौपचारिक संवाद गर्न एक साताका लागि बैठक स्थगित भए पनि यस अवधिमा प्रगति भएको छैन ।
आइतबारदेखि शनिबारसम्म प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालबीच एकपटक अनौपचारिक संवाद भए पनि विवाद समाधानका लागि शीर्ष तहमा अरु कुनै भेट भएका छैनन । दोस्रो तहका नेताहरुले भने सीमित भेटघाट गरेका छन् । यसबीचमा दुवै समूहले आ–आफ्नो समूहमा आन्तरिक छलफल तीव्र पारेका छन् ।
मंसिर २८ को सचिवालयमा दाहालले १९ पेजको प्रस्ताव पेस गरेपछि ओलीले मंसिर १३ को बैठकमा ३८ पेजको जवाफी प्रस्ताव पेस गरेका छन् । दुवै प्रस्तावमा एक अर्कामाथि आरोप लगाएका छन् । त्यसैले यसपटकको बैठक विगतको भन्दा झन् पेचिलो भन्ने सम्भावना छ ।
बैठकको समय लम्बाए पनि दुवै पक्ष आआफ्नो रणनीतिमा छन् । ओली समूह बैठक लम्ब्याउने, साझा प्रस्ताव बनाउने वा कार्यदल बनाउने योजनामा छ । ओली समूहले गत २६ भदौको स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयनमा फर्कनु नै अहिलेको समस्याको समाधान भएको बताएको छ ।
तर, दाहाल–नेपाल समूहले भने स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन नगरेर ओली अगाडि बढिसकेकाले सबै निर्णय अबको बैठकबाट गराउने पक्षमा छ । स्थायी कमिटीको निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराएर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने दाहाल–नेपाल समूहको योजना छ ।
स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा रहेको ओली समूह दबाबमा छ । त्यसैले संक्रमणकालीन कमिटीले बहुमत–अल्पमतको निर्णय लिन नसक्ने यो समूहको तर्क छ ।
नेकपामा लामो समयदेखिको विवाद १५ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै भदौ २६ को स्थायी कमिटीबाट हल भएको थियो । तर, निर्णय कार्यान्वयनलाई लिएर दुई समूहबीच मतभेद बढेपछि पार्टी झन्डै विभाजनको तहमा पुगेको छ ।
विवादबीच ओलीले चुनावअगाडि प्रधानमन्त्री र महाधिवेशनअघि पार्टी नेतृत्व नछाड्ने अडान लिएका छन् । तर, दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहले देश र पार्टीका लागि ओलीले त्याग गर्ने बेला आएको बताएका छन् । केन्द्रीय कमिटी बैठक ५ पुसमा बस्ने निर्णय छ ।
Previous articleललितपुरको ग्वार्कोस्थित पेट्रोल पम्पमा ड’ रलाग्दो आ’गलागी, मान्छेहरुको भा’गाभाग
Next articleअख्तियार पुर्व प्रमुख दीप बस्न्यात लाई विशेष अदा’लतले थुन्न आदेश दियो ! अब के हुन्छ ? Deep Basnyat (कस्तो सजाय हुनु पर्छ?)